पहाड Altai ... कहाँ यो साँच्चै शानदार ठाउँमा जान? आखिर, यो किनारा पनि सबैभन्दा अनुभवी यात्री र साहस कर्म गर्ने व्यक्ति प्रभावित गर्न सक्षम छ भन्ने कुनै गोप्य छ।
प्राकृतिक स्मारक को एक किसिम विशेषज्ञहरूले पृथ्वीको अमीर ठाउँ विचार भनेर ठूलो हो। स्थानीय जनसंख्या पनि धेरै राम्रो उत्साहित पर्यटकहरु बताउन सक्ने Knights, ड्रेगन, सुनको पोखरी र अचम्मको गुफाहरु बारे दन्त्यकथा धेरै रहन्छ।
खण्ड 1 गर्नुभएको Altai पहाड। कहाँ जाने? क्षेत्र बारेमा सामान्य जानकारी
पहाड र फाँटमा पश्चिमी साइबेरिया को दक्षिणपूर्वी भाग मा - यी अद्भुत स्थानहरू Altai भनिन्छ। हामीले विश्व एटलस टिप्न र हेर्न प्रस्ताव। को Altai हिमालहरूको नक्सा एउटा वृद्धि चासो कारण सक्दैन। किन? हिउँ टोपी, चिसो पोखरी र बरफ को छिटो नदी ढाकिएको छन् भनेर राजसी पहाड: यो कुरा सबै विशेष ध्यान योग्य छ भन्ने छ।
खैर, केही क्षेत्र को शीर्षक मूल तुर्की शब्द "सुन" आउँछ भनेर थाह छ। सुन्दर र धेरै प्रतीकात्मक, छैन यो छ? र वास्तवमा, यहाँ तपाईं शंकुधारी taiga र शोभा पराउँछु सक्नुहुन्छ अल्पाइन Meadows, स्तर मा एक सुन्दर subalpine घास र टाढा खण्डका छैन Stony अर्द्ध-मरुभूमि steppe हेर्न।
खण्ड 2. Altai पहाड। कहाँ जाने? ग्लेसियर, पहाड, झरने र पोखरी
यस क्षेत्र मा एक पटक, तपाईं हाम्रो ग्रह को कसरी अद्वितीय प्रकृति महसुस गर्छन्। यो धेरै सुन्दर हिमालहरू र ग्लेसियर को एक ठूलो संख्या, त्यसैले यात्राहरु को कमी छ र तपाईं सही हुनेछैन यात्रा। खैर, उत्तर-Chuya रिज क्षेत्र मा फ्लैट घाटिहरुमा, पर्वतारोहण लागि जहाँ उत्कृष्ट अवस्था छ। तर मनोरञ्जन यस प्रकारको मात्र सबैभन्दा निडर यात्री गर्न अपील गर्नेछ।
यसको zest यस क्षेत्रमा छ। धेरै ग्लेसियर एकदम आधुनिक विद्वान को दृश्य को बिन्दु असामान्य हो भन्ने तथ्यलाई। तिनीहरूले विशेष अवस्था द्वारा प्रतिष्ठित छन्। एक वास्तविक बरफ देश - उदाहरणका लागि, Akkem हिमनदी पृथ्वी Aktru जाडो लागि ऊर्जा स्तम्भ -62ºC तापमान Taldurinskiy सबै भन्दा ठूलो हिमनदी गर्न "चिसो पोल" छ ठाउँमा मानिन्छ।
मा झरने को Altai पहाड पनि धेरै भिन्न छन्। त्यहाँ पहाड भीर बाट उम्कन एक आँधी हो, र त्यहाँ चट्टानको बीच संघर्ष, लगभग तुरुन्तै ravines मा गायब गर्ने, ती हुन्। नजिकै झरने हिंसात्मक साग देख्न सकिन्छ, तर कहिलेकाहीं नग्न र चट्टानहरू र घाँस को एक ब्लेड को ढेर पाउन सकिन्छ। एक पर्यटक आफ्नै आँखा जेट विभिन्न रङ कञ्चनपानी संग देख्दा, छाप धेरै उज्ज्वल छन्!
पोखरी पनि असंख्य छन्। Altai पनि अचम्मको को देश भनिन्छ नीलो ताल। को Waterfront मा यो समय अझै उभिए छ भने देखिन्छ - तपाईं पानी नजिकै खडा र वरपरको पहाड हेर्न सम्म एक भावना छोड्न छैन।
विभिन्न moraine-dammed पोखरी को ठूलो गहिराई। तिनीहरूले पहाड मा उच्च स्थित र पाइन वन कमै मात्र छन्, यो स्थानीय परिदृश्य संग सजाया छ। को permafrost क्षेत्रमा अद्भुत thermokarst पोखरी देख्न सकिन्छ। आफ्नो सानो र पानी को गहिराई फरक गाढा रंग छ। एक सबै भन्दा ठूलो आकार tectonic मूल छ, जो Teletsky ताल अलग छ।
खण्ड3गर्नुभएको Altai पहाड। कहाँ जाने? स्थानीय आकर्षण
तर प्रश्न अझै पनि खुला रहन्छ। आंशिक हामी यस क्षेत्रका रहस्य गर्न शुरू थिए, तर यो सूची exhaustive छैन।
त्यसैले Altai पहाड कहाँ? म लामो-प्रतीक्षा छुट्टी समयमा एउटा यात्रा मा विष गर्नुपर्छ? वा यो समुद्र हरेस राम्रो छ? पर्यटकहरु अनुसार, वर्ष को कुनै पनि समय Gorny Altai हरेक पर्यटक को अचम्मको प्रकृति निश्चित अविस्मरणीय अनुभव दिन्छ। त्यहाँ सधैंभरि यो अद्भुत पहाड देश को आकर्षण सम्झना मात्र भने लायक एक यात्रा हो कि धेरै ठाउँ हुन्।
उदाहरणका लागि, पर्चा Akkurum मा मा हावा को कार्य द्वारा गठन थिए रोचक पत्थर मशरूम, हो चट्टानको। तर Katun को उपत्यकाका terraces को Katun नदी मिति आफ्नो उमेर र मूल रहस्य कायम - तिनीहरूले 200 मिटर भन्दा बढि द्वारा समुद्र स्तर माथि उठन! को शाही ब्यारो जसको उमेर 25 लाख। वर्षभन्दा छ, पनि छ। र यद्यपि, उत्सुक यात्री Patmos को टापुमा मन्दिर भ्रमण पर्छ अनुसार, यो क्षेत्र सबैभन्दा रहस्यमय दन्त्यकथा जोडिएको छ।
वनस्पति उद्यान, बेलग्रेड: ठेगाना। बेलग्रेड मा Arboretum
उहाँले घर क्रिकेट बस्थे। यो के हो? हामी लोक omens सिक्न
किन आर्कटिक मा ध्रुवीय भालू को संख्या घट्छ?
एमिली हैम्पशायर: अभिनेत्री को जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
"Dota 2" अपडेट गरिएको छैन: समाधान
Vasomotor rhinitis: vasomotor को उपचार आधुनिक तरिका rhinitis